t-Mhanza Algorithm | ThatsLuck.com
Maitiro ekuyera mhanza
Kuyera mhanza nemazvo, kana kuti kuyedza kufanotaura mipata yeroulette mukana munguva pfupi iri pure utopia, zvisinei hazvo sezvo huwandu hwezvipenga hunowedzera, nekuda kwehuwandu huwandu hwakafungidzirwa hunotanga kushomeka uye hushoma. tsvaga rombo redu kana nhamo mukutamba mukana pa roulette, zviri kuyerwa.
Nzira inogoneka yekuyera mipata ndiyo yakatotsanangurwa mu ► iyi posvo, pandinokuudza nezve yakakurumbira Marigny coefficient.
Nekudaro, iyo Marigny coefficient ine miganho, sezvo yakavakirwa chete pamatanho anopikisa uye anokwanisa kugadziriswa, kureva kuti pasina kufunga kuvepo kwe zero, izvo zvinosuruvarisa kuita kukanganisa kukuru kwekuongorora.
Muchokwadi, kana tikatarisa semuenzaniso makumi mana emakumi emakore pa roulette, sekureva kwaMarigny tichava nemhanza yakanaka (yakaenzana nekashanu nguva yemakiromita emidzi yematinji akaridzwa) ichave zvikamu chiuru zvakahwinhwa, asi zvinosuwisa kuti muna makumi mana spins isu tichave takasangana nayo 40.000 times zero, saka sezvaunogona kuona neiyo roulette kubhejera paRed kana Dema kunyangwe mashoma (kubheja kwakapetana), yakasvika 5 / 1.000 spins, nekuda kwe zero zero masvomhu hazvigoneke kuhwina kana imwechete yuniti!
Uyu muganho, zvakadaro, wakanyanya kukura kana tichifunga kubhejera pane imwe chete nhamba, mune ino kesi muchokwadi nekugara tichitarisira kunyangwe kuwanda (kubheja kubheja) tinogona kurarama kunyange anopfuura mazana maviri ezviuru!
Kufananidza kwemufananidzo wapfuura kwakawanikwa neiyo software bot ► Roulette Bias Sniper, sezvaungaona mushure memakumi mairi mazana maviri nemakumi mapfumbamwe emakumi mapfumbamwe emitambo yakatamba zvakatetepa, paine dzimwe nhamba mbiri dzaizoita kuti mutambi akunde zvakaenzana nenhamba makumi matatu dzekuhwina, saka dzinopfuura zvikamu zve215.000! Asi uyu ndiwo musoro watichakurukura zvakadzama mune imwe posvo.
Imwe nzira yekuyera mipata, asi yakanyatsojeka kupfuura iyo yapfuura, ndeye ► Kugoverwa kwevadzidzi t, iyo yandichakuratidza iwe nekukasira.
Mbiru yekutanga yemaitiro aya ndiyo yiyero yekuyera yemipaka, inonzi kutsauka kwakazara (sqm).
Iko kutsauka kwakaringana kwakaenzana nechetere mudzi wechigadzirwa cheuwandu hwezviitiko (n) nguva dzakanakira mikana (p) uye neapo kwakatarisana (q).
semuenzaniso kana isu tichifunga 1.369 spins ye roulette yatinayo
Mbiru yechipiri ye t mudzidzi è avhareji yechiitiko (m), icho chakaenzana nechigadzirwa chehuwandu hwezviitiko (n) uye mukana unofadza.
zvakare zvine hukama ne1.369 spins pamusoro, kana tichifunga imwe chete nhamba, isu tine:
Aya maitiro maviri, anoreva (m) uye anoreva kutsauka kwesikweya (sqm), ane kukosha kwakazara kwehuwandu, nekuti anotendera chero mukana kuti uderedzwa kune imwechete chiyero, zvisinei nezviitiko zvazvinoitika.
Uku kuderedzwa kwakakosha kunoitwa chaizvo ne t mudzidzi, unova iwo muyero uripakati pekutsauka (unonzwisiswa semusiyano pakati pezviitiko zvinofadza U uye zvinorehwa) uye zvinoreva kutsauka.
Saka isu tine izvo:
Zvekare zvine chekuita nekufungidzira 1.369 yekukanda bhora roulette, kana semuenzaniso nhamba yegumi nenhatu ichiuya kakapetwa kaipfumbamwe, isu tine izvo
Iyo + kana - chiratidzo inoratidza hyperfrequency kana hypofrequency.
Coefficient t mudzidzi saka zvinonyanya kubatsira nekuti kune manhamba ematafura ayo anogona kuwanikwawo pamambure, ayo anoratidza chaizvo iyo chikamu chekugona kwekuti mamwe maitiro eanopfuura t.
Zvinowanzo fungidzirwa kuti iyo kunonyanyisa muganho Del t mudzidzi zvakaenzana 4, iwo ndiwo muganho wehuwandu wekuti zvakabvumiranwa kuti mukana wekuzvipfuura hausi nil.
Iwo maviri mhosho dzaMarigny
Yakajekesa izvo iyo t mudzidzi uye kuti yakaverengerwa sei, ndinokuudza ipapo ipapo kuti nzira iyi yekuyera yakasarudzika kuti yakakodzera kupfuura iyo Marigny coefficient, nekuti mumhedzisiro yainoburitsa inofungawo nezve mutero (zero).
Kukanganisa kukuru kwaMarigny kwaive kufunga kuti kana mukana wasvika musiyano wechitatu kana kupfuura, unofanirwa kudzoka, saka akataura kuti angangoda kudzoka kwepakarepo.
Iko kukanganisa kwekutanga kwaMarigny kwaive kusiri kufunga neziro, nekuti kana chiri chokwadi chaizvo kuti gomba rinofanira kudzorerwa, ichokwadiwo kuti hapana munhu anogona kusimbisa pekutanga kuti mangani kurohwa uku kunofanira kuitika.
Kana mukana ukasvika semuenzaniso gap 4 (yakanyanya kwazvo Marigny coefficient kubva pakakwirira iri 5), ndiani angativimbise kuti chikamu chekuchinjika pakati petsvuku nedema chinogara chero mazana ezvisvinwa hachigone kutanga?
Kwete zvakaipa, mumwe munhu anofunga, muzvikamu zvekuchinjana haukunde asi kana kurasikirwa ... asi kwete, nekuti chero zvodii zero ichabuda zvinoenderana nezvaanotarisira, ichipaza pamberi mukana wese watingawana apo mukaha unodzoka wakanangana neyakaenzana masikirwo.
Chechipiri uye chakakomba chikanganiso chakakura chaMarigny: kufunga nezvezvipineti zvakaunganidzwa kwemazuva akati wandei uye kubva kune dzakasiyana roulette seyakagarisika imwechete (inozivikanwawo se "kugara wega").
Ndakaedza zvine mutsindo iyi inonakidza pfungwa uye mushure memamirioni mashoma akateedzana masipiniti ndakasvika pamhedziso iyi: nekuda kwezvikonzero zvekongiri yekuvimbika kwenhamba, mipata yeroulette inofanirwa kuyerwa chete mune akateedzana ezvipenga anotaridzirwa kune rimwe chete jenareta rakavagadzira. mune isina kumiswa yakateedzana marongero.
Mune mamwe mazwi, kana isu tichida kuti ongororo pa1.000 spins ive yakavimbika, isu tinofanirwa kunyora chiuru chemazino tichiramba tichienda kune imwechete roulette uye kwete semuenzaniso gumi netanhatu dzezviuru zana dzinotorwa pamazuva akasiyana uye kubva kune akasiyana roulette.
Gara uchirangarira pfungwa iyi mune ramangwana, nekuti yakakosha uye zviri pachena kuti haishande kana tichitsvaga roulette tsvete, nekuti mune iyi nyaya kuwanda kwe data rese kucharamba kuchiratidza, zvirokwazvo kuchasimbisa kuvepo kwe kukanganisa kana kwete, asi naizvozvowo musoro wenyaya watovharwa mu ► imwe posvo.
t-Luck Algorithm (iyo dzidziso)
Iye zvino ngatione kuti ndeapi fungidziro yekufungidzira ini yandakateedzera iyo nyowani software t-Mhanza Algorithm.
Ngatimboongororai tafura iri pamusoro zvakare:
Kubva pane iyo data yakataurwa, kana semuenzaniso iyo tsvuku inosvika pane kukosha t mudzidzi zvakaenzana ne3,00 zvinoreva kuti mukana wekuti kukosha uku unosvika pa3,50 ingori 0,02%!
Muchokwadi, zvisinei, izvi hazvisizvo, nekuti pamwe mubvunzo watinofanira kuzvibvunza ndewekuti: kana mukana ukasvika t = 3,00 inosvika kangani pa t = 3,50? Ini handisati ndaita iyi ongororo, asi hazvizotora nguva refu uye ndinofungidzira kuti tafura iri pamusoro inofanirwa kuverengerwa nenzira kwayo seizvi: pane isingazivikanwe nhamba yezvimedu zvezviuru zvezviuru zviya zvinowana kukosha kwe t = 1.000 zvichave 3,00% apo kuchange kusisina tranche ine t inopfuura 0,13.
Nekudaro, kuda kufunga sekuvimbika iyo inofungidzira fungidziro yekuti tranche ine t = 2,50 inogona kudarika t = 3,00 chete mu0,13% yematambudziko, ini ndaida kuseta iyo t-Mhanza Algorithm pane imwe pfungwa, mupfungwa yekuti vese Marigny coefficient uye t mudzidzi, pavanosvika pakukoshesesa, ivo varikumiririra chimiro chakasimba kwazvo chemukana wakapihwa, izvo sezvatakamboona, zvinogona kudzoka mushure mekuziva kuti mangani mazana ezviuru, apo isu tichiri kubhadhara mutero pacounter kusvika zero.
Kusimbisa izvo zvataurwa kusvika pari zvino, ini ndinofunga aya mairafu maviri, achireva chiuru chemazino akaongororwa ese maererano neukoshi t mudzidzi (yekutanga girafu) uye maitiro eiyo gadziriro yeRed mukana.
Sezvauri kuona, girafu yekutanga inosimbisa kuti kana kukosha t = kwasvika -2,5 mushure memazana mazana maviri ekuruka (isu saka tiri pamberi pekufungidzira kwekutsvuka, kureva kuti dema rakabuda kakawanda) kukosha kwe t mudzidzi inotanga kusimuka, zvichiratidza kuti iyo Tsvuku mukana zvishoma nezvishoma inotanga kuenzanisa huwandu hwayo zvine chekuita neyakaenzana Nhema mukana.
Iko kusimuka, zvisinei, hakusi kungoerekana kwaitika, asi isu tinoona kuti iyo balance (kukosha t mudzidzi padhuze ne zero) zvinosvika chiuru chiwi, saka tinotamba mazana masere ekuruka matinobhadhara runako rwe1.000 / 800 = 800 mazero uye sezvamunoona mugirafu yechipiri nekuda kwezero mari yekufungidzira yemutambi akatanga. kubheja mushure me37 spin (mari / gap kukosha -22 mune yechipiri girafu), inovhara chiuru chinokanda nezvidimbu zvidiki zvakakunda, nekuti yakawanda yemukana unobva mukuvhara gap wakadyiwa ne zero.
Ndeipi ingave iri nzira yakakwana yemutambi mune iyi kesi? Zvingadai zvakatanga kutamba pa t = -2,5 (pakutenderera 204) uye mira nekukurumidza apo zvidimbu zvishoma zverubatsiro zvave kuwanikwa (pakutenderera 246) ine kukosha t mudzidzi yakakwira yakadzokera ku -2,00 nekudaro ichikunda zvikamu zvitatu zvebatsiro. Zvinoita sezvidiki? Mutambi arikubvunzwa angadai akahwina zvidimbu zvitatu muma 3 spins, kana 3% yeRoyi!
Kubva pane izvi zvese zvinowana zvedu Mutemo wekutanga: tanga kubheja chete kana iyo t mudzidzi inosvika pakukosha kwe +/- 2,5 uye mira nekukurumidza panowanikwa purofiti.
Mbiru yechipiri ye t-Mhanza Algorithm kutarisa kukosha uku kweiyo t mudzidzi 2,5 kwete mumikana inopinda musimba rakasimba semugirafu iri pamusoro ichinongedzera kuRutsvuku, asi mumikana yekuti panzvimbo pacho iratidze mamiriro akatsiga, akapfava kupfuura mamwe uye andakatumidza zita Middle Trends.
Asi kana mikana iyi isina mukaha muhombe, vanosvika sei paukoshi t mudzidzi 2,5?
Heino muenzaniso wezvandinoreva ipapo ipapo Middle Trends.
Iwo maviri mairafu ari pamusoro anogara achitaura nezveRed mukana, ino nguva inoenzanisirwa pane zana masipika.
Ukatarisa iyo yekutanga graph uchaona kuti iyo kukosha t mudzidzi zvakakwana zvasara akatsiga, ndizvo pakati pe +1 ne -1,5 mukuita, mugirafu yekutanga kukosha uku kuri pachena kwakatangira kubva pa0, ndokukwira kuenda pa +1, ndokudonhera pa -1,5 uye pakupedzisira ikadzokera ku +1.
Parizvino hapana chinoshamisa, asi kana tichiverenga kukosha kwayo t mudzidzi zvinoenderana ne zvishoma uye zvakanyanya kukosha tasvika tichava nazvo kubva ku +1 (max) yakadonha kusvika -1,5 (min), saka paive neimwe kutsauka pakati pekukosha uye kwakanyanya kukosha kwe + 1 / -1,5 kana 2,5 mapoinzi!
Pano isu tawana yedu yekurevesa kukosha 2,5 uye nekudaro kana uchitenderedza spin makumi maviri egirafu iyo 20 yakagadzirwa uye isu tinotanga kutarisa paRed (nekuti pa -2,5 isu tiri mune yekunyepedzera mamiriro) apa ndipo pakaperera ( uye manhamba) anotipa mubayiro, tichitamba kusvika t mudzidzi = +1 tingadai takakunda zvikamu gumi neshanu muzasi kwemakumi masere ekuruka!
Zviripachena zvichibva pamutemo 1 pamusoro tingadai takamira mushure mekutanga purofiti, zvisinei nemuenzaniso uyu ndinotarisira kunge ndajekesa pfungwa yeMiddle Trend uye maitiro ekuverenga t mudzidzi kuchivakira pamukaha uripakati pehunhu uye huwandu hwehuwandu hwasangana nahwo.
t-Luck Algorithm (iyo Software)
Zvese zvakajeka kusvika ikozvino? Ok, usazvidya moyo, software ichaita zvese izvi kuverenga t-Mhanza Algorithm, mutambi achazongopinza manhamba sezvavanobuda uye pamwe kubheja chete kune kunyangwe kuwanda (kubheja kubheja) kana ichitaridzwa neSoftware.
Mushure mekumisikidza t-Mhanza Algorithm nekodhi iwe wagara uchiziva nzira yekuwana, ingovhura tafura yemutambo uye tanga kupinda manhamba akatoburitswa, kuti udaro tinya pane rimwe chete mabhatani ari pakati penhamba yakaverengerwa kubva pa0 kusvika pa36.
Paunodzvanya pane imwe nhamba, inoonekwawo mubhokisi pazasi kuruboshwe (Kwekupedzisira) seyedu chiyeuchidzo chiyeuchidzo.
Ive nekuchenjerera kana iwe uchinyoresa iwo manhamba, nekuti kana iwe ukaisa iyo nhamba zvisirizvo hapana nzira yekugadzirisa uye iwe unofanirwa kudzvanya pane iyo logo ThatsLuck pazasi kurudyi, izvo zvinonyanya kugadzirisa seti uye ipapo unofanirwa kutanga kwese zvakare.
Mukuita hapana chimwe chinhu chekuita, kana imwe yemukana wekutarisa iyo, sezvauchaona, iri:
►Kuderera / Kumusoro
inogadzira mudzidzi t-kukosha gomo re2,5 pakarepo mu t-Mhanza Algorithm yambiro inogoneswa ichiratidza mukana wekuvavarira!
Sezvauri kuona mumufananidzo uri pamusoro, mune ino chiratidzo chakayedzwa kuyedza kubheja pane yekutanga yechitanhatu (SES 1), iyo sezvaungaona mumakoramu maviri kurudyi (anomiririra Kakawanda yemhando dzakasiyana dzemikana), haisi sestina inowanzoitika (inova SES 2), kana iri diki (SES 3 neSES 6 haina kumboburitswa).
Kana zvikaitika kuti nhamba iri pakati pe1 ne6 ikabuda, kukosha kwemudzidzi t kunodonha pazasi pe2,5 uye nekudaro yambiro ichanyangarika, zvakajeka kusvikira paine yambiro yekuti haubheje uye wobva wanyora manhamba ari kuhwina zvinoenderana chronological kurongeka kwekusunungurwa.
Zviripachena kuti zvichaitikawo kubheja mikana yakawanda panguva imwe chete uye, mune ino kesi, iwe unogona kuedza kubheja kunyangwe mashoma mayuniti eakaderera kukosha pane manhamba akafanana pakati pemikana yekubheja, sezvandakaita mumufananidzo pazasi , kwandakayambuka paCOL 1 neSES 2 uye nekudaro ini ndichibhejera nhamba mbiri dzakajairika 7 na10.
Ndinovimba ndapa zvakanyatso kuongororwa kweprojekti t-Mhanza Algorithm, mazano angu akareruka: usambowedzere kubheja kwako uye tanga kubva pakutanga mangani mauniti ekuhwina usati wamira (Stopwin), kukosha kwandinokurudzira kuisa pa10, zvadaro ita sezvaunoda, zvakakosha sezvazviri nguva dzose kunakidzwa nemari yebhangi!